菲克, Onye ode akwukwo na Shangke Chemical
Banyere chepụtara: 菲克
1. Gịnị bụ sulforaphane? Sulforaphane (SFN) bụ sọlfọ nwere onyinye nwere sọlfọ nke a na-achọta na akwa akwụkwọ nri dị ka kabeeji, broccoli, na bok choy. Emere ka egosiputa ihe ahia Sulforaphane n’enye gi ezi aru ike. N'ime nri ndị a, a na-ahụ sulforaphane n'ụdị arụghị ọrụ ana-akpọ glucoraphanin nke bụ nke akụ na - akụ nke glucosinolate ogige. Sulforaphane na glucoraphanin Sulforaphane (SFN) na-arụ ọrụ ...
Anụtụla banyere Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) ma ọ bụ “Isi iyi Ntorobịa”? ” N’ime ezigbo nri gị na mmega ahụ, a na-eme ahụ gị ka ọ nwee ezigbo metabolism. O bu ihe nwute, na oria, nkani na ndu ma obu ibi ndu adighi nma, ahu gi amalite inwe nsogbu di iche iche na ahu na aru oru ya dara ada nke oma. Obere nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) dị n'etiti erughị eru ndị a, nke ahụ ...
1. Gịnị bụ Pterostilbene? Pterostilbene bụ kemịkal dị mkpa nke ekepụtara n'oge ndụ ụfọdụ osisi dịka ụzọ isi lụso ọrịa ọgụ. Otutu a dika ogige ozo a maara dika Resveratrol ma di nfe na ntinye ihe ozo. Ihe mgbakwunye Pterostilbene bụ nnukwu ihe ọkụkụ. Nke a pụtara na ha nwere ike ịbanye ha n’ahụ ngwa ngwa na ngwa ngwa, enweghị mgbada na usoro mgbaze. Pterostilbene ntụ ntụ bụ ...
Kedu ihe bụ pyrroloquinoline quinone (pqq)? Pyrroloquinoline quinone (PQQ) nke a makwaara dị ka methoxatin bụ kọmpụta vitamin na-eme ka nri dị ugbu a n'ọtụtụ ngwa nri. PQQ na-emekwa n’onwe ya na mmiri ara ara mmadụ yana akwara mammalian. Agbanyeghị, a na-ahụ ya na nkeji nkeji na nri ya mere pqq ntụ ntụ mepụtara dị mkpa iji nweta nha zuru oke na ahụ. Achọpụtara PQQ na mbu dịka coenzyme na…